‘कोरोना एन्टिबडी ६ महिनासम्म रहन्छ’ – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ७ मंसिर २०७७, आईतवार १०:१६
उनीहरुले नियमितरुपमा कोरोना संक्रमण तथा एन्टिबडीको परीक्षण गर्दै आएका थिए । सो क्रममा कोरोनाविरुद्धको एन्टिबडी ६ महिनासम्म रहने पाइएको हो । अध्ययनको क्रममा मानिसको शरीरमा जति धेरै एन्टिबडी विकास भयो दोस्रोपटक संक्रमण हुने जोखिम पनि त्यति नै कम हुने गरेको पाइएको थियो ।त्यस्तै अर्को एक अध्ययनले कोरोना भाइरस परिवारका अन्य रोगविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमताले पनि कोभिड–१९ को लागि काम गर्ने गरेको पाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस कोरोना खोप : कुनै देश छुट्न सक्छ ?
त्यस्तै अर्को एक अध्ययनले कोरोना भाइरस परिवारका अन्य रोगविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमताले पनि कोभिड–१९ को लागि काम गर्ने गरेको पाइएको थियो । संक्रमणविद् केटी जेफ्रीले कोरोना खोप आउन लागेको अवस्थामा यस किसिमको समाचार उत्साहवर्द्धक रहेको बताएकी छन् । छोटै अवधिको लागि भए पनि एकपटक एन्टिबडी विकास भएपछि कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिने यो अध्ययनले देखाएको जेफ्रीले बताइन् । यो पनि पढ्नुहोस कोरोना खोप : कुनै देश छुट्न सक्छ ? अक्सफोर्डको यो अध्ययनमा १२ हजारभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागी थिए । जसमध्ये ११ हजार स्वास्थ्यकर्मीको कोभिड–१९ एन्टिबडी नेगेटिभ पाइएको थियो । अध्ययनको क्रममा एन्टिबडी नभएकामध्ये ८९ जनामा लक्षणसहितको संक्रमण देखिएको थियो । यद्यपि एन्टिबडी विकास भइसकेका कसैमा पनि लक्षणसहितको संक्रमण देखिएको थिएन । एन्डिबडी भएकामध्ये पनि तीनजना मानिसमा भने लक्षणविनाको कोभिड–१९ पाइएको थियो । लक्षणविनाको कोभिड–१९ देखिनेको संख्या एन्टिबडी नभएका मानिसहरुमा ७६ थियो ।